⭐ Thenga ithrafikhi yangempela yewebhusayithi yabantu ᐅ Ikhwalithi yezivakashi ezisezingeni eliphakeme eziguqula ⇪
Ikhaya Lokuhamba Kwethrafikhi
Thenga okubhekiswe kakhulu
UKUHLELA I-TRAFFIC MANJE
Singathumela ithrafikhi kweyakho:
BONAKELE BAHLONI BOKUQINISEKA
UMGOMO WEQHAWU LOKUPHEPHA
Thenga izivakashi zangempela zewebhusayithi
Siyazi ukuthi kungakhungathekisa kanjani ukuthola ithrafikhi ethe xaxa kusayithi lakho. Futhi noma ngabe uyakwazi ukuphatha umshado, yini iphuzu uma bengakulungele ukuguqula izivakashi zewebhusayithi ezingokoqobo?
Kaningi sibona abantu besebenzisa yonke imali yabo ukumaketha futhi bethola ukuthobeka okuncane kumawebhusayithi abo - Umkhankaso kuFacebook / Instagram ungakutholela ukuthandwa kepha akusho ukuthi ukuguqulelwa kwiwebhusayithi traffic / Clicks. Futhi kanjalo nje ukuthi amathemba abo nezifiso zabo zokuba ngumnikazi webhizinisi eziyisithupha noma eziyisikhombisa akhuphuke ngentuthu.
Ngabe uke uzizwe sengathi kungenzeka unyathela ngendlela efanayo?
Noma ngabe ungumuntu odonsa kanzima, osakaze izinkulungwane zamadola ezikhangisweni noma umnikazi webhizinisi elincane ukuthatha ibhizinisi lakho online okokuqala; sizwe ngaphandle. Singasiza!
Ifomula yokuholela okuningi nokuthengisa akuyona inkimbinkimbi njengoba abanye bengase bacabange. Okudingayo Okuningi Ithrafikhi eyiNiche. Udinga izivakashi ezikulungele ukungena emigodini yazo, ukhiphe amakhadi awo esikweletu, uthenge okuthengisayo.
Futhi indlela enhle yokuthola ithrafikhi ye-premium ukushiya umsebenzi kithi.
AKUKHO MFUNO OBUCHWEPHESHE NGOKWESITOLO SAMAKI SOKUFUNDA
AKUKHO MALI OKWENGEZIWAYO NGOKWETHULAYO ​​LESIQHAWU SESI-FACEBOOK
AYISEKHO UKUTHENGA OLUNYE "INKOSI" EKUFUNDISA INDLELA YOKWENZA IZIGIDI
NGEKE SIPHINDE SITHATHE IGAMBULA KWABANYE “ABATHONYA”
Ngakho-ke Ngabe Umsebenzi Wethu Wokwethula Iwebhusayithi we-Niche Uqondiswe Kanjani?
Uma ungakaze uzwe traffic niche ukuqondiswa kabusha, yingoba akekho umuntu okuthiwa yi-guru ozokutshela ngakho - le ndlela ingavele incintisane nemithombo yabo eyigugu yomgwaqo futhi iphazamise inzuzo evela ezifundweni abazithengisayo.
Kodwa-ke, ukuqondiswa kabusha kwethrafikhi ye-niche kuyindlela ephumelela kakhulu yokuthola ithrafikhi efanelekile ye-inthanethi efaneleke kakhulu ebhizinisini lakho. Kusho ukuthini lokhu ukuthi izivakashi zewebhusayithi ozitholayo ngabantu asebevele benentshisekelo kwimvelo yebhizinisi lakho. Isibonelo, iklayenti elithengisa izesekeli zemoto lizothola ithrafikhi ebhekiswe kumasayithi ezimoto.
Sisebenzisa amasu anhlobonhlobo anjenge-pop-unders, ama-algorithms wokufunda ngomshini, kanye nokuthenga kwabezindaba okuhleliwe kusuka database enkulu yamanethiwekhi wokukhangisa. Futhi, sibambe uluhlu olukhulu lwezikhangiso lwamakhosi nobukhali.
Ngokukhula kwe-E-Commerce neDropshipping eminyakeni yamuva nje, siyazi ukuthi izinsizakalo zethu kufanele zihambisane ngokuqhubekayo nalokho okudingwa yimakethe. Kungakho ithimba lethu lochwepheshe lihlola njalo futhi lenze ngcono amasistimu ethu ngokuhlolwa bukhoma emizamweni yethu ye-R & D. Umphumela? Ithrafikhi eqondile yokuguqula engenzeka kakhulu! Sisebenzisa ubuchwepheshe bamuva be-AI (Artificially Intelligent), Siqondisa kabusha ithrafikhi ebaluleke kakhulu ku-niche yakho (Isibonelo, umuntu othengisa amagajethi we-tech uzothola ithrafikhi kumawebhusayithi / amabhulogi we-tech)
Wonke amathrafikhi angabantu ayi-100% futhi abhekiswe kakhulu futhi ngakho-ke athuthukisa ukubonakala kwewebhusayithi yakho namathuba okuthengisa.
Uhla lwethu olukhethwe ngokucophelela lwamawebhusayithi lusebenza ukuqondisa izivakashi zewebhusayithi ukusuka kuma-IP ahlukile kuya ezweni lakho olithandayo ne-niche. Sifaka emazweni ahlukahlukene e USA, I-UK, i-Europe, Singapore, I-Asia kanye ne-Afrika. Ngezimakethe ezingaphezu kwe-320 niche, siyaqiniseka ukuthi uthola ithrafikhi ephezulu ekhokhelwe, ngaleyo ndlela ikhulisa ukuthandwa kwewebhusayithi yakho, futhi yandise amathuba angapheli wokuthengisa.
Nathi oseceleni kwakho, iwebhusayithi yakho izobonakala ngokubonakala okuningi.
Nakhu ukuthi ungaqala kanjani:
I-1. Gcwalisa IFOMU
I-2. AKE USITSHELE KAKHULU IMininingwane YAKHO
I-3. Hlela emuva futhi Ubuye NJENGOBA SIKUTHOLA KONKE OKWENZAKALAYO
Ifomu le-oda oligcwalisa ekuphumeni lisinikeza yonke imininingwane esiyidingayo ukuze sifeze isicelo sakho. Kuthatha nje imizuzwana ye-30 ukuyiphothula.
Ngaphambi kokuthi siqale inqubo yethu, siyaqiniseka ukuthi siqinisekisa isicelo sakho ngokuhambisana nezinyathelo zethu zokuphepha. Qiniseka, asikubuzi ngamaphasiwedi - ubumfihlo bakho bubaluleke kakhulu kithina!
Ngesikhathi senqubo yokuqinisekisa, siqinisekisa ubuqiniso bebhizinisi lakho - phela, senza imisebenzi esemthethweni ngakho-ke silindele ukuthi amaklayenti ethu nawo abe ngaphezulu kwalokho! Lokho kusho ukuthi isiza sakho kufanele sibe semthethweni ngokwemvelo. Iwebhusayithi yakho ayinakuba nanoma iyiphi i-spyware, adware, virus noma i-Trojan worms kuyo. Uma ufaka i-oda lalezi zinhlobo zamawebhusayithi, sizowuvala umkhankaso wakho wethrafikhi futhi ngeke uthole ukubuyiselwa imali.
Uma nje uyinkampani esemthethweni ehambisana nemigomo nemibandela yethu, isicelo sakho sizocutshungulwa kungakapheli izinsuku ezintathu kuya kwezine!
Futhi voilà! Uma usuthumele isicelo, akukho okunye ongakwenza. Uzoqala ukubona ukuthontelana kuwebhusayithi yakho phakathi kwe-3 kuya ezinsukwini ze-4 zesicelo sakho. Futhi konke okukodwa kokushaya okutholayo kuqinisekisiwe ukuba yisivakashi sangempela sabantu!
I-Niche Online Traic ibamba ngaphezulu kweminyaka engu-2 yamava
Sisebenza ngamanethiwekhi amakhulu wethu we-Global Advertising. Le nkampani isebenza ngenethiwekhi enkulu yabalingani bezokukhangisa bomhlaba wonke abakhipha i-traffic yabantu yangempela yabantu, futhi balwela impumelelo yamakhasimende abo. Iqembu lethu lisebenzisa ithalente eliphambili, kufaka phakathi abantu abasebenze namagama amakhulu kubuchwepheshe nasekukhangiseni.
Singumthombo wokuqala wethrafikhi yangempela ye-Intanethi nezivakashi ezihlosiwe. Siyaziqhenya ngomsebenzi wethu ukuqinisekisa ikhwalithi ephezulu kakhulu nokuhlobana kwethrafikhi yangempela yabantu.
Yilokho okusenza sibe ngumthombo wethrafikhi we-PREFERRED wokudonsa phansi, i-E-Commerce kanye nanoma yiliphi elinye ibhizinisi elinobukhona online. Kuze kube manje, sihlinzeke ngethrafikhi yezitolo ezingaphezu kwama-50,000 XNUMX online, kumapulatifomu ahlukahlukene, kufaka phakathi iShopify, i-Clickbank, i-Etsy, i-Ebay ne-Amazon. Ungakhathazeki - sikusibekele!
Ukuthenga ithrafikhi kwaNiche Online Traffic akusho nje ukuthi kuqinisa amandla ekusebenzeni kwakho kwe-inthanethi kwebhizinisi lakho, kepha futhi nesevisi yamakhasimende ephezulu.
Lapho ukhetha i-Niche Online Traffic, uzothola indlela yethu eyingqayizivele ibe yi-niche yakho oyikhethayo.
Izimboni Zemboziwe (azikhawulelwe):
Ithrafikhi ku-Blog / Site Yakho Yokuqukethwe
I-Cryptocurrency: ICO / IEO / STO
Impahla / izakhiwo
Amafutha we-CBD / Hemp
Amapayipi / Ukuqhafaza
Ama-ejensi weDijithali / ama-ubunifu
Amanye amabhizinisi amaningi we-B2B ne-B2C
Shiya ithrafikhi yakho kuwebhu Ochwepheshe
Izikhangiso ze-Facebook neMikhankaso yokuthonya ziyabiza kakhulu?
Ngabe uyagula ngokuba “nokuthandwa” nje futhi awukho iTrafikhi eyenziwe?
Siyaqonda. Futhi sinakho okudingayo.
Sivivinya ithrafikhi yethu sonke, Amasistimu wethu we-AI afunda futhi azivumelanise ne-24 / 7 ngakho-ke ukuhambelana nekhwalithi yethrafikhi iba ngcono ikhefu ngalinye.
ISIVIVINYO SOKUXHUMANEKA KAKHULU
Izivakashi ezithunyelwe kuwe zingabantu abavele banentshisekelo ku-Niche yakho, yingakho ithuba eliphakeme kakhulu lokuguqulwa.
Sisebenzele lo mkhakha iminyaka engaphezu kwamashumi we-2. Inani lebhizinisi le-B2B ne-B2C likhule ngokuxhamazela nathi kuyo yonke le minyaka.
Amanani wokuhlenga ukuthenga ithrafikhi yewebhusayithi
Izivakashi Zansuku Zonke ze-200
I-100% Izivakashi Zangempela Zabantu
Ikheli Langempela le-IP
Ukuqondiswa kwegama elingukhiye
Inketho yokuhlwaya yeNiche
Abavakashi abangama-200 nsuku zonke izinyanga ezi-6 NOMA izivakashi eziyi-1000 zansuku zonke ezinyangeni ezi-1
Abavakashi abangama-200 nsuku zonke izinyanga ezi-12 NOMA izivakashi eziyi-2000 zansuku zonke ezinyangeni ezi-1
Phakamisa Izikhundla Zokubaluleka
Izindlela Zokusika Edge
LOKHO OKUSHIWO BAMAKHAYA NGATHI
"Kuhlolwe ukutholakala kwe-traffic esizeni esisha sha futhi ngingasho ukuthi lelo yikhwalithi, ithrafikhi yangempela yabantu. Ngizozama futhi."
I-LAURA - SHOPIFY UMNINI WESITOLO
Siyekile ukusebenzisa izikhangiso ezibizayo ze-FB ngemuva kokusebenzisa laba bantu. Inkonzo eyisibonelo!
UMark - UMPHATHI WOKUTHENGISA enkampanini ye-saas
I-NicheOnlineTraffic inikeza insiza enhle ngokusekelwa okusebenzayo nokunembile. Benza konke okusemandleni ukukunikeza ithrafikhi oyidingayo, ithrafikhi yabo iphephe ngokuphelele futhi ingokoqobo. Okuhlaba umxhwele ngempela, kuwukuqhakaza ibhizinisi lami !.
Copyright © 2020 Niche Online Traffic. Wonke Amalungelo Agodliwe.